Ugu yaraan 17 qof oo shacab ah oo ka cararayay dagaalka Ciraaq oo ku dhimatay miinada dhulka lagu aaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldUgu yaraan 17 qof oo shacab ah oo ka cararayay dagaalka Ciraaq oo ku dhimatay miinada dhulka lagu aaso
November 5, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Shacab ka cararaya dagaalka magaalada Mowsil ee dalka Ciraaq. [Sawirka: Alalam News Network]
Baqdaad-(Puntland Mirror) Todobo iyo toban shacab ah ayaa ku dhimatay qarax miinada dhulka lagu aaso oo ka dhacay dalka Ciraaq iyaga oo dadka dhintay ay ka cararayeen magaalo kutaala waqooyiga oo ay haystaan maleeshiyada Daacish sidoo kale loo yaqaan ISIS, sida ay sheegeen booliiska.
Dadka dhintay ayaa saarnaa gaari xamuul ah marka uu qaraxa la kacay, nin booliis ah ayaa sidoo kale ku dhintay.
Dadka ayaa ka cararayay magaalada Hawija oo kutaala waqooyiga.
Dhimashada ayaa timid iyadoo ciidamada dowladda Ciraaq ay sii wadaan weerarkooda magaalada kale ee Mowsil oo ah magaalada ugu dambaysa ee ISIS ku xooganyihiin.
Juba-(Puntland Mirror) Diyaarad ay leedahay shirkada diyaaradaha Koonfurta Suudaan ayaa burburtay iyadoo ku degaysay garoon kuyaala magaalada waqooyiga-galbeed ee Koonfurta Suudaan kutaala ee Wau maanta oo Isniin ah, waxaana ku dhawaacmay dhowr rakaab ah, sida [...]